Dirqaalaalee qindaa'ina afaanii
Caancalli fuulotaJapanese keessa barbaaduu fi Teessuma Asian yoo dirqaalli gargaarsa afaan Asian fuula caancala Afaanota keessaa kaka'ee fi gongeen dhaamsaa Dirqaalaalee ammas baname qofa mul'ata. Fuulli caancala Teessuma barruu walxaxaa kan mul'atu yoo gargaarsi CTL dandeessifame qofa dha.
Amaloota to'annoo qubee, waa dhugoomsaa fi murfisaa ifteessa.
Japanese keessa barbaachuu
Dirqaalaalee barbaachaa Japanese ifteessa.
Qindaa'inoota durtii typographic barruu Asian dhaaf qindeessa.
Teessuma Barruu Walxaxaa
Galmeelee teessuma barruu walxaxaa qabaniif dirqaalaalee qindeessa.
Title is: Dirqaalaalee qindaa'ina afaanii